जागीरको प्रलोभनमा यौन शोषण गर्ने दुराचारीलाई चिन्नुहोस् , गरीबलाई १२ लाख ठग्ने सहकारीको पर्दाफास ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
जागीरको प्रलोभनमा यौन शोषण गर्ने दुराचारीलाई चिन्नुहोस् , गरीबलाई १२ लाख ठग्ने सहकारीको पर्दाफास ! (भिडियो)
प्रकाशित मिति : Apr 09, 2019
काठमाडौं । न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ३६३ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा निम्न विषयमा रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छः
आफूसंग सुते जागिर लगाइदिने भन्दै युवतीहरुको शारीरिक शोषण गर्ने व्यक्ती पक्राउ
काभ्रेकी परिर्वतीत नाम सम्झनालाई केही समय अघि आफू हेल्वेटास नामक आईएनजिओको कर्मचारी भएको भन्दै प्रेक्षा शर्मा नाम गरेको फेसबुक एकाउन्टबाट फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो ।
छिनभरमै साथी बनेका उनीहरुबीच कुराकानी सुरु भयो । पछि विस्तारै सम्झनालाई आईएनजिओमा कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै प्रेक्षाले जागिर दिने लोभ देखाइन । जव सम्झना जागिरको बारेमा उत्सुक देखिन् तव प्रेक्षा शर्माले त्यसका लागि आफ्नो बोससंग एक रात विताउनु पर्ने भन्दै अफर गरिन् ।
खालि कागजमा ल्याप्चे लगाई गरीब परिवारलाई दुख दिने सहकारीको पर्दाफास
पैसा हुनेहरुले गरीबलाई कति सम्म दुख दिन्छन्, सर्लाहीकी निरु भुजेलले भोगेकी छिन् । निरु भुजेलकी छोरी अस्मिता भुजेल सातदोवाटमा रहेको मधुवन सहकारीमा काम गर्थिन् ।
पढाईका कारण आधा महिनाको तलव ३ हजार नै नलिई अस्मिताले सहकारीको जागिर छाडिन । तर सहकारीका अध्यक्ष बद्री भण्डारीले अस्मिताले सुरुमा ८ हजार पछि गएर २४ हजार रुपया तिर्नु पर्ने भन्दै उन्का परिवारलाई तनाव दिन थाले ।
सेना र प्रहरीको मान्छे भन्दै रेष्टुरेन्ट र होटलहरुमा दादागिरी गर्ने यी व्यक्तीहरु
होटलहरुमा प्रहरी हु आर्मी हु भन्दै दादागिरी गर्ने अनि खाएको पैसा नदिने जस्ता काम केही व्यक्तीहरुले गर्दै आएका छन् ।
नयाँ बसपार्कको एक होटलमा आफू अपराध महाशाखाबाट अएको भन्दै दादागिरी गरेको भन्ने कल आएपछि न्युज २४ का सीधाकुरा जनतासंगको टिम नयां बसपार्कको उक्त होटलमा पुग्यो । त्यहा ३ जना व्यक्ती थिए । जस मध्ये एक जना आफूलाई प्रहरी, एक जना ईन्जिनियर र एक जना आफू सेनाको मान्छे भएको भन्दै आफूहरुले खाएको ७ हजार रुपयां नतिर्ने भनिरहेका थिए ।